कर छलीको समाचार रोक्न हामीलाई ५० हजार घुसको अफर, अष्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थीहरु लाइभ (भिडियो) « NBC KHABAR
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३४२ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथै विभिन्न विशेष ब्यक्तित्वहरुसँग प्रत्यक्ष फोनवार्ता पनि गरिएको छ ।
१. करोडौंको कर छलि, समाचार रोक्न आर्थिक प्रलोभन देखाउँदै स्टोर सञ्चालक !
काठमाडौं । काठमाडौंमा विना दर्ता राजश्व नै नतिरी धेरै फर्म सञ्चालन रहेका छन् भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । हामीलाई काठमाडौं चमतीमा रहेको लक्ष्य इन्टरप्राइजेज र यसले सामान सप्लाई गर्ने पसलहरुमा भ्याट बिल नै नकाटीने गरेको सुचना प्राप्तन भयो । हामीले सुचना फलो गर्दै लक्ष्य इन्टरप्राइजेजले सामान लोड गरेको गाडीको फलो ग¥यौं ।
यो गाडी गोंगबु नयाँबसपार्क स्थित निशान खाद्य स्टोरमा रोकियो । सामान अनलोड हुन थाल्यो । हामीले सवारी चालकसँग भ्याट बिल माग्दा उनले भ्याट बिल नभएको र सँधै भ्याट बिल बिनै सामान ओसार पसार गर्ने गरेको बताए ।
२. अदालतमा बलात्कार मुद्धा– पीडितलाई प्रत्येक दिन डर र धम्की !